Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah saaxiib ayaana ii sheegay in gudaha dalka Jarmalka aad uga taaban kartid gabdhaha dabadooda oona midaasi laguugu ciqaabin. Midaasi ma tahay mid run ah? – Tips for refugees
Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah saaxiib ayaana ii sheegay in gudaha dalka Jarmalka aad uga taaban kartid gabdhaha dabadooda oona midaasi laguugu ciqaabin. Midaasi ma tahay mid run ah?
Maya, midaasi ma ahan mid run ah.
Sharci cusub ayaa lasoo saaray bisha Nofembar 2016.
Dabcan saaxiibkaaga weli ma ogga midaasi.
Sharcigu hadda wuxuu qorayaa:
Qofna looma oggola in uu qofkale uga taabto jirkiisa “qaab galmo ah” haddii uusan doonaynin in la taabto.
“Qaab galmo ah” macnaheedu waxay tahay:
In taabashadu ay tahay mid galmo kusaabsan.
Ama taabashadu ay tahay meelaha xasaasiga ah ee jirka.
Tusaale ahaan, dabada, naasaha ama inta u dhaxaysa lugahooda.
Midaan sidoo kale waxaa lagu magacaabaa “dhibaatayn galmo”.
Qofkasta waxaa loo oggolyahay in uu go’aansado asaga sida loo taabanayo.
Qofkastana waxaa loo oggolyahay in uu go’aansado asaga halka laga taabanayo.
Midaan waxaa lagu magacaabaa “xadidaada-galmo shakhsiyeed”.
Midaasi waa xaq ay leeyihiin dhammaan dadka oo dhan.
Qofkasta oo ku xad gudba xaqaasi waa la ciqaabayaa.
Posted on December 23, 2016 Author editorialteamCategories Rights - Rechte
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno jir ah waxaana khasab igu ah in aan ilaaliyo walaashayda si aan u hubsado in aysan banaanka ula bixin wiilasha. Waa in ay ugu dhaqmaan si wanaagsan dadka dhexdooda. Midaan waxay ka tahay arin sharafeed qoyskayga. Waalidiintaydu waxay dhahaan in aan anigu masuul ka ahay. Inta baddan arintu waa mid dhib baddan. Maxaa ila habboon in aan sameeyo?
Next Next post: Fasalkayga waxaa dhigata gabar 17 sanno jir ah. Waxay noo sheegtay in ay dhab ahaantii tahay wiil. Waan ku wareeray arintaasi! Sideen ula dhaqmayaa?